आईएमएसले ल्यायो ‘बिग डिस्काउन्ट, बिग स्माइलस्’ अफर, यस्ता छटु र गिफ्ट Bizshala -
काठमाण्डौ। आईएमएस ‘लिटिल स्माइलस्’ ले दसैँको पावन अवसरमा ‘बिग डिस्काउन्ट, बिग स्माइलस्’ अफर ल्याएको छ।
यो दसैँमा आईएमएस ‘लिटिल स्माइलस्’ ले बेस्ड डिल र छुटको अफर ल्याएको छ। यसका साथै कम्पनीले प्रिमियम बेबी ब्रान्ड र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डमा छुटको अफर ल्याएको छ।
आईएमएस ‘लिटिल स्माइलस्’ ले ग्राहकलाई डा. ब्राउन, बीबीलुभ र ड्रिमबेबीजस्ता प्रडक्टहरुमा २५ प्रतिशतसम्मको छुटको अफर ल्याएको छ। ग्राहकले ५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सामान खरिद गर्दामा १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन्। यसका साथै २० जना भाग्यशाली ग्राहकले १ हजार रुपैयाँबराबरको स्मार्टडोको गिफ्ट कार्ड वा इनर्जाइजर पावर बैंक पाउनेछन्।
आईएमएस ‘लिटिल स्माइलस्’ ले इनर्जाइजर पावर बैंक र लाइनरफ्लुक्स एयरफोनमा २५ प्रतिशतको छुटका साथै फिमी, डीजेआई ड्रोन, क्रने ह्युमिडिफायर र एयर प्युरिफायरको खरिदमा ५ प्रतिशतको छुट पाउनेछन्। यसका साथै फिमी ड्रोनको खरिदमा २ हजार रुपैयाँबराबरको पावर बैंक निःशुल्क पाउनेछन्।
नेपालको पहिलो बेबिज र किड्स प्रिमियम मल्टी ब्रान्ड आउटलेट, आईएमएस् ‘लिटिल स्माइलस्’ काठमाण्डौ दरबारमार्गस्थित दरबार मल र कमलपोखरीस्थित सिटी सेन्टरमा अवस्थित छ।
मल्टी ब्रान्ड आउटलेटमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरु डा. ब्राउन, बीबीलुभ, ड्रिमबेबी, हिमालयन बेबी केयर, क्रेन, फिमी, डीजेआई, इनर्जाइजर, लाइनरफ्ल्युक्स र अन्य ब्रान्डहरु उपलब्ध छन्।
ग्राहकले आईएमएसको ‘लिटिल स्माइलस्’ को शोरुममा भ्रमण गरेर आवश्यक सामान खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।